Tsamba kubva Management Team
MTP-MPO Multi-Fibers Mhinduro
MTP-MPO Cable Magungano
Dhijitari Vhidhiyo Transceiver
Fiber Optic PASSIVE zvinoriumba
Fiber optic chinobatanidza
Fiber optic adhaputa
Cable Management uye yakakomberedzwa
Tester uye Tools
INTCERA rave Brand itsva Fiberconcepts 'kubva apfuura. Fiberconcepts ari kutungamirira pose mugadziri uye nokutengesa shoma pusa faibha optic zvinoriumba kushandisa zvizere kutsoropodza network. Zvinoriumba edu uye mhinduro inogona kuwanikwa mafomu mu nemabhizimisi, hurumende nevamwe pose. Fiberconcepts, rakaumbwa muna 2002 uye iri makuru Shenzhen, China.
Fiberconcepts vakashandisa simba neunyanzvi kusika INTCERA chigadzirwa Portfolio. Kusvikira zvino, Fiberconcetps rava chinoshingaira imwe yose mabviro pusa Manyiminya interconnect zvinoriumba.
Kubudirira nyaya yedu nyore: vanosangana mutengi zvinodiwa tiine unhu zvigadzirwa akanunura pamusoro nguva, nguva dzose pane kwakanaka mutengo pamwe boka nyika basa. Nokuda kurerutsa chigadzirwa yepamusoro uye mabasa, isu makasimbisa yakareba tose tibatsirwe pamwe makasitoma edu pose
Kuratidza kuzvipira ichi, tinopa zvakawanda mabasa, kusanganisira kushanda rutsigiro, kurovedza chigadzirwa, zvekushandisa rutsigiro uye kugadzwa rubatsiro.
Fiberoncepts zvigadzirwa batanidza mabhizimisi, hurumende nevamwe rakasiyana mukuru waivako interconnect zvinogadzirisa anotsigirwa vakazvitsaurira basa uye kurovedza. zvigadzirwa dzedu munyika yose mutengi vakaisvoipa unomutenda Fiberoncepts 'uye kwemakore anopfuura 10 makore tava akagadzirirwa uye kugadzirwa mumwe chigadzirwa anunure chaizvoizvo sezvakapikirwa; nguva imwe neimwe kukurumidza kuita pamwe mukana wokushandiswa uye kunyatsoshanda. Vatengi kusarudza Fiberoncepts vasvike basa pamwe chikwata chedu vakazvitsaurira nenyanzvi kukubatsira pamatanho ose ari kwacho. ruzivo rwedu uye unyanzvi achakubatsira kuwana interconnect kugadzirisa zvaunoreva.
Fiberconcetps unotsaurirwa pakupa ngaiteerere vatengi uye rutsigiro, nokutsanya kukurukura uye chigadzirwa ruzivo chawo zvakatevedzana makore 10 ruzivo.
Kana uri huripo mutengi, iwe wakaona nokukurumidza pakukurukura kwedu, chigadzirwa ruzivo, unhu vimbiso, uye yakakwirira pamwero basa. Kana uri mutengi mutsva, taura nesu ndapota, iwe vachafadzwa tiine unhu hwedu uye basa.
Saka, sezvo uchapupu kuzvipira ichi, tinokwanisa kuita INTCERA inova yakakurumbira muchiso nokukurumidza.
Pen-Type Visual Fault Locator, MTP To LC makaseti , MTP 12F 24F 36F 48F 96F Patchcords , Polarization Kuchengeta MTP-MTP Patch netambo , MTP Cable Patch tambo , MTP SM MM OM4 Patchcords ,